Nas 2181 days ago
Punter 2181 days ago
Visitor is reading Event: BANA - DASHAIN/TIHAR SUBHAKAMANA SANJH 2066
Visitor from US is reading And the Female Personality of the year goes to ...
Visitor from GB is reading royal takeover poll
Visitor is reading Missing Home? Watch this.
Visitor from DE is reading Google Instant Messenger
Posted on 03-12-15 9:50 AM Reply [Subscribe]
Last edited: 12-Mar-15 09:51 AM
Posted on 03-12-15 10:58 AM [Snapshot: 71] Reply [Subscribe]
कस्तो खुसिको खबर निउरोलोजिस्त ब्रो ! यो बर्ष मेरी प्यारी प्रियंकाजी जस्तो चर्चामा आउँन भाको कलाकार अरु कोइ पनि छैन कलिवुडमा ! मैले त् उहा सानै हुँदा देखि नै उहाको लक्षण देखिसकेको थिए ! शाहरुख खान पनि उहाको डान्स हेर्न आफ्नै प्लेन चढेर काठमाडौँ आइपुगे ! बिचरी अरु खातेनी हिरोनिहरु कति आरिस गर्दै होलान !
Posted on 03-12-15 5:57 PM [Snapshot: 345] Reply [Subscribe]
म आज एकदम खुसि छु मेरो प्यारी ले यो उपदी पाको मा !!!
हुने बिरुवा को चिल्लो पात भने झैँ मेरी प्यारी २००५ देखि नै मलाई लागि राको थियो एन ले एकदिन सागरमाथ को सिखर चुम छिन् भनेर !!!
येही उप लख्क्ष्य मा मैलै आज ब्लु लाबेल किनेर लिएर आको छु आज येही खाएर मा न उ छु मेरी प्यारी को सफलता !!!
Posted on 03-12-15 6:16 PM [Snapshot: 355] Reply [Subscribe]
"मैलै आज ब्लु लाबेल किनेर लिएर आको छु आज येही खाएर मा न उ छु "
ये मैले नि आज सेलिब्रेसन गर्न पर्छ भनेर बियेर लिआको नि पुन्तर ब्रो ! आज स्पगेटी नि किनेर ल्याको वालमार्ट गइ वोरी ! अब उमलिवोरी सस हालेर खान पर्छ ! आज रमाइलो गर्छु एक्लै डेरामा ! फेरी भोलि बिहान त् घण्टा हान्न जान पर्छ ! तेसैले ४ वोटा मात्र पिउछु आज त् !
Posted on 03-12-15 6:22 PM [Snapshot: 386] Reply [Subscribe]
"'ये मैले नि आज सेलिब्रेसन गर्न पर्छ भनेर बियेर लिआको नि पुन्तर ब्रो ""
पिउनु पर्छ नाज ब्रो, यो त एकदम खुसि को कुरा हो
एस्तो मौका मा न पिए कहिले पिउने र?
मलाई त ब्लु लाबेल न खको नि ७ वर्ष भै सक्यो
आज खानु पर्यो मेरो प्यारी को खुसियाली मा !!!
Posted on 03-12-15 6:50 PM [Snapshot: 404] Reply [Subscribe]
म खातेको ब्लु लेबेल अफ्फोर्ड गर्ने हैसियेत नै छैन पुन्तर ब्रो ! मैले त् रेड लेबेल मात्र पिएको छु ! त्यो पनि खासै मिठो लागेन ! अब म "क्लास एक्ट" नै परिन ! यी बियेर पियो बस्यो ! मेरी प्यारी प्रियाँकाजी त् एक दम क्लासि हुनुहुन्छ ! काठमाडौँकि एलिट बर्गकि ! हामी मुजी खाते, जंडियाहरुलाइ त् झिंगा नै सम्झिनु हुन्छ होला हगि पुन्तर ब्रो ?
Posted on 03-12-15 7:20 PM [Snapshot: 455] Reply [Subscribe]
हो नाज ब्रो हामी लै त घिन्गानै सम्जिनु हुन्छ हाम्रो माहारानी ले !!!